२७४ स्थानीय तहमा नतिजा सार्वजनिक, कुन पार्टीको कति ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
२७४ स्थानीय तहमा नतिजा सार्वजनिक, कुन पार्टीको कति ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, असार २० । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव भएका ३ सय ३४ स्थानीय तहमध्ये २ सय ७४ तहको आधिकारिक परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
अहिलेसम्म ३५ मध्ये २० जिल्लाका सबै स्थानीय तहको मतणना सकिइसकेको छ । एमालेले प्रदेश नम्बर १ मा ५३, प्रदेश ५ मा ३३ र प्रदेश ७ मा ३४ स्थानीय तह जितेर १ सय २० स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ ।
कांग्रेस १०२ स्थानीय तह जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कांग्रेसले हालसम्म प्रदेश नम्बर १ मा ३८, प्रदेश ५ मा २९ र प्रदेश ७ मा ३६ स्थानीय तह जितेको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर १ मा ८, प्रदेश ५ मा १९ र प्रदेश ७ मा ७ स्थानीय तह जितेर ३४ सिटसहित तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ । यस्तै, संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश नम्बर ५ मा ५ र प्रदेश नम्बर १ मा एक स्थानीय तह जितेर ६ सिटसहित चौथो स्थानमा रहेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकले प्रदेश नम्बर १ मा २, ५ मा २ र ७ मा एक स्थानीय तह जितेर ५ सिटसहित पाँचौं स्थानमा रहेको छ ।
कुन पार्टीको कति ?
एमालेले जितेका स्थानीय तह १२० :
प्रदेश नम्बर १ (५३)
– मार्इ(जोगमार्इ गाउँपालिका, इलाम
प्रदेश नम्बर ५ (३३)
– टिकापुर नगरपालिका, कैलाली
कांग्रेसले जितेका स्थानीय तह (१०३)
प्रदेश नम्बर १ (३८)
– चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर
– मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा
– सुन्दरहरैचा नगरपालिका, मोरङ
याे पनि पढ्नुस नेमकिपालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन विप्लपको धम्की (पत्र सहित)
याे पनि पढ्नुस स्थानीय चुनाव तीन चरणमा
माओवादीले जितेका स्थानीय तह ९३४० स्
– ओमसतिया गाउँपालिका, रूपन्देही
प्रदेश नम्बर ७ (७०)
संघीय समाजवादी फोरमले जितेका स्थानीय तह (६)
फोरम लोकतान्त्रिकले जितेका स्थानीय तह (५)
राष्ट्रिय जनमोर्चाले जितेका स्थानीय तह ९२० स्
राप्रपाले जितेका स्थानीय तह ९३० स्